Warshadda Soosaarka Shiinaha Lightall Transparent LED Transparent | Szlightall
Muuqaalka Iftiinka 'Lightall Transparent LED Display'
Bandhigga 'Transparent LED' wuxuu ku fiican yahay qurxinta, naqshadeynta hal-abuurka iyo isticmaalka xayeysiinta, wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah shaashadda caadiga ah ee loo yaqaan 'LED', oo ugu habboon darbiga dhismaha muraayadda gudaha. Waxyaabaha ay hal-abuurnimadeedu tahay '3D animations' waxay keeni doontaa waayo-aragnimo muuqaal oo cajaa'ib leh oo cad, dadkuna waxay ku dhex arkayaan muraayadda iyagoon horjoogsan aragtida.
1.Shopping Mall Transparent Gudaha Banaanka Daaqada Muraayadda Display
Bandhig xirfad leh oo hufan oo hogaaminaya, daaqadaada iftiim.
Hufnaan sare oo ka sarraysa 75% heerka daahfurnaanta xagga hore iyo xagga dambe.
Dadku fiidiyowga iyo sawirrada way ka dhex arki karaan muraayadda si cad iyada oo aan loo jeedin wax xannibaya
Iftiin aad u sarreeya, guddi kasta oo la hoggaamiyaa waa qiyaastii 7kg
Xakamee 3G, 4G, USB iyo HDMI.
Waxay ku guuleysaneysaa inay u dirto fiidiyoow iyo sawir muuqaal ah APP.
IP65 heerka biyuhu
Si ballaaran loogu isticmaalo gudaha iyo dibadda
Rakibid iyo Dayactir Fudud
Uma baahnid qaab dhismeed bir ah, badbaadi waqtiga iyo kharashka rakibidda, oo si fiican ugu habboon rakibidda go'an ama kirada ah.
Mashruuca rakibida goobta
Shaashadda hagaagsan ee loo yaqaan 'Transparent led screen' waa heshiis loogu talagalay xarunta dukaameysiga derbiga galaaska ah, suuqa laga dukaameysto, dukaanka silsiladda sumadda leh, 4S dukaanka, dukaanka dahabka, garoonka diyaaradaha, bandhigyada, bandhigyada moodada, iwm.
Macluumaadkan waxaa kaliya loogu talagalay tixraacaaga sababtoo ah qaabeyn kala duwan iyo xuduudaha alaabada.
Taxane Products P3.91
Cabirka Golaha Wasiirada 1000 * 500mm
Cabirka Module 500 * 250mm
Habka Wadista 1/7 iskaanka
Miisaanka Golaha Wasiirada 7kg
Fogaanta ugu fiican 3m-50m
Eeg Xagasha H: 120 °, V: 120 °
Awood gelinta AC110V / 220V, 60Hz
Cusboonaysii Heerka -30 ～ + 70 ℃
Huurka Operating 10 ～ 90% RH
Damaanad 3 Sanno
Nolosha qofka 00 1000000 saacadood
Habka Xakamaynta NOVASTAR, LINSN, COLORLIGHT
Nidaamka Howlgalka Win98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10
Shahaadada CE, ROHS, FCC
Hore: Muuqaalka Iftiinka Bannaanka Dibadda
Xiga: Lightall kirada LED Display 500x1000mm Taxanaha
Muuqaalka 'Lightall Poster LED Display'
Soosaarida Iftiinka Gudaha ee Lightall
LIGHTALL Gudaha HD HD Muuqaal Muuqaal Gidaar ah